PRISM: Sisitimu Yekuvandudza Yako Yemagariro Midhiya Shanduko | Martech Zone
Ichokwadi ndechekuti iwe haugone kutengesa pamasocial media chiteshi asi iwe unogona kugadzira kutengesa kubva kune vezvenhau kana iwe ukaita uzere kupera kumagumo maitiro.
Yedu PRISM 5 nhanho fomati inzira iwe yaunogona kushandisa kugadzirisa pasocial media kutendeuka.
Muchikamu chino tichajekesa iyo 5 nhanho fomati uye nhanho kuburikidza nemuenzaniso maturusi aunogona kushandisa padanho rega rekuita.
Iyo PRISM chimiro
Kuvaka yako PRISM iwe unofanirwa kuve neakakura maitiro, zvemukati uye nemazvo maturusi. Yese nhanho yePRISM pane akasiyana maturusi akakosha.
Kuti ubudirire pasocial media unofanirwa kuve nevateereri. Unofanirwa kuvaka vateereri pane zvinoenderana asi iwe zvakare unofanirwa kuongorora vateereri vako kuti uone kuti vateereri vanokodzera. Iko hakuna chikonzero chekuva nevateveri miriyoni imwe kana vasina kukodzera.
Semuenzaniso chishandiso chekushandisa is Affinio iyo inopa kuparara kwakadzama pane vako vateveri veTwitter. Iwe unogona kushandisa chishandiso chemahara kana iwe uine vashoma pane zviuru gumi vateveri. Kune mapuratifomu ese iwe unofanirwa kuongorora vateereri vako nguva dzose kuti uone kuti zvakakosha.
Kuti uite kuti vateereri vako vakuteerere, unofanirwa kuvaka hukama nevateereri vako. Iwe unovaka hukama pachiyero uchishandisa zvemukati kana kuvaka hukama pane 1 kusvika 1 hwaro nevatambi vanokosha.
Kuvaka hukama iwe unofanirwa kushandisa yekudyidzana midhiya manejimendi chishandiso senge Agorapulse. Agorapulse inozivisa vanhu vari murukova rwako ivo vanokurudzira kana vanhu vanongogara vachiita newe. Iwe haugone kuvaka hukama nemunhu wese pane 1 kusvika 1 hwaro saka iwe unofanirwa kuramba uine ziso kune vanokurudzira kana vanoita.
Ini yeInbound Traffic
Zvemagariro midhiya chiteshi haisi yekugadzira kutengesa saka unofanirwa kushandisa chaiwo matekiniki ekutyaira traffic kubva pasocial media kune yako webhusaiti. Iwe unogona zvakare kutyaira traffic kuburikidza nedzimwe nzira, semuenzaniso, kushandisa blog.
Chimwe chishandiso chikuru chekukubatsira iwe kuona mazwi akakosha ekugadzira zvemukati zvakapoterera ndeye Semrush. Semuenzaniso, unogona kuisa muzita remakwikwi ako uye woona yepamusoro gumi kiyi musanganiswa wemisanganiswa yekutyaira traffic kune yavo saiti. Iwe unogona ipapo kugadzira zvemukati zvakapoterera aya akakosha mazwi kana zvakafanana.
S yeVanyori uye Zvemagariro Kudzosera
Vazhinji vevashanyi vako vehukama havazotenge pakushanya kwekutanga saka unofanirwa kuyedza kutora ruzivo rwavo uchishandisa email. Optinmonster ndeimwe yeakanakisa email ekutora maturusi anowanikwa.
Kana vashanyi vakasapa email yavo kero iwe unogona zvakadaro dzosera vashanyi ava nezviziviso paFacebook kana mamwe mapuratifomu.
Iwe saka unofanirwa kuvaka kunze kwekutengesa fannels inoshandura vashanyi vako kana vanyoreri veemail kutengesa. Chimwe chezvikamu zvakakosha kwazvo pakuita mari kugadzira upfu hweyese nhanho yefanera yako. Kutendeuka chishandiso chikuru chekuita izvi.
Zvemagariro venhau zvakanaka pakuvaka vateereri uye kuziva kwako, yako kambani, zvigadzirwa zvako uye masevhisi.
Asi…. zvakare yakanakira kugadzira kutengesa kana iwe ukaita izere magumo kumagumo maitiro. Iwe unofanirwa kunzwisisa matanho ese esisitimu yekutengesa munharaunda uye nekushandisa chaiwo matekiniki uye kushandisa chaiwo maturusi edanho rega rega.
Unogona here kushandisa iyi sisitimu yekutengesa vezvenhau?
Tags: advanced media mediakutendeuka fanerainbound Marketinginopinda traffickuita mariPRISMmagariro enhaukuita mari pasocial mediahukama hwehukama hwehukamakugarisazve munharaundakunyoresa kudzokorodza